Amiibada - Wikipedia
1 Dareenka amiibada
2 Neefsashada iyo qashin-tuurka Amiibada
3 Dhaqdhaqaaqa amiimada
4 Taranka amiibada
Amiibada malaha xubno ay wax ku dareento, waxaase jirta in sytoobalaasamka dhamiba deegaanka dareemi karo. Tusaalo ahaan haddii aysid ama alkol barxan lagu shubo agagaarka amiiba nool, si tartiib ah ayeey uga faagataa labadooda.
Neefsashada iyo qashin-tuurka AmiibadaEdit
Ogsijiinta ay ubaahantahay amiibadu oo ay nolosheedu ku xirantahay, waxay ka faaftaa xuubka unugga, iyadoo ka imaaneeysa agagaarka biyaga ugu dhow. Karboon laba-ogsadhka (CO2) badidiisa iyo qashinka iyo qashinka milmi kara ee borotiinku ka yimid waxay ka dusaan xuubka unugga, waxana ka mid ah ammoniyada. waxaa dhacda biyo badan in ay soo galaan amiibada oo anay u baahnayn, waxaana usabab ah siimowga iyo biyaha soo raaca saxarrada ay isku wareejiso. Haddii aanay lahayn biyaha hab ay iskaga saarto, way dibbiri lahayd oo dilaaci lahayd. Marka ay ururaan biyaha siyaada ahi waxay noqdaan dalool urura. Marka uu daloolku gaaro jimirkiisa ugu weyn ayuu isku ururaa oo yaraadaa, siina daayaa biyihii ku ururay. Biyahaasi waxay ka baxaan dillaac ku yaal xuubka oo ah ku-meel gaar. Daloolka urura ayaa ilaaliya ribnaanta biyaha ee unugga amiibada.
Meeshii cunto lihi way soo jiidataa, haddii halka ay usii marayso lagu daadiyo bataaxna way iska dhaaftaa. Irbad caaradeed haddii lagu mudo, ama karonto la dhex mariyo biyaha udhow, way duubtaa addimo beenaadyadeeda, waxayna noqotaa dhibic yar oo wareegsan.
Addimo beenaadyada ayaa u suura galiya amiibada in ay dhaqdhaqaaqdo. Haddii aad u fiirsato amiiba firfircoon waxaad arki doontaa in uu saytobalaasamkeedu leeyahay socod qulqulaya. saytobalaasamka qulqulaya ayaa cadaadiya xuubka unugga, sameeyana tuur loo yaqaan addimo-beeneed. Addimo-beeneedyadaasu waxay ka sameeysmi karaan meel kasta oo ah oogada unugga, wuxuuna sii weynaadaa marka qaybka cufka amiibada ka mid ahi ku soo qulqulo. Isla markaaba waxaa laga yaabaa addimo-beeneedku meel kale ka baxo, markaana waa inuu kii hore baaba'aa. Maxaa yeelay, saytobalaasamka ayaa cufka unugga dib ugu qulqula, taasoo sabab u ah dib-u-noqoshada addin-beenaadka. Socodka nuucaan oo kale ah ayaa loo yaqaan dhaqdhaqaaqa amiibada.
Marka amiibada haysato cunto ku filan iyo xaalado degaaneed oo la jira, ayaa jirkeeda laba-laab u koraa. Weynaashahaa ay weynaatay ayaa sabab u ah in uu xuubkeedu ku filnaan waayo, awoodina kari waayo in uu qashinkeeda saaro iyo in uu ka haqabtiri waayo baahida ay u qabto ogsijiinta.
Heerkaa marka la gaaro ayey tarantaa, tarankaas oo ah qaybsan unug oo sahlan, marka ay amiibadu u diyaar garoowdo in ay qaysanto waxay iska dhigtaa cuf kubadeed.
Bu'du way qaybsantaa waxayna noqotaa laba bu'ood oo walaala ah. Labadaa bu'ood waxay kala tagaan labada dacal ee unugga. Haddana bartamaha saytobalaasamka ayaa ceejisma. Labada bar ee unuggu u kala baxay, waxay suubiyaan laba cuf unug oo kala gaar ah, labada unug ee samaysmay waxa uu leeyahay mid kasta bu', iskiisna wuu noolaan karaa.
Qaybsankaas marka uu dhacayo kama badna saacad qura. Sijiyo amiibooyinka ka mid ahi haddii xaalado degaan oo haboon ay waayaan, darbi adag ayey ku wareejiyaan borotobalaasamkooda, si ay u noolaan karaan. Bu'da markaas ayey u qaybsantaa bu'ooyin yaryar. Bu'yar oo kastaan waxay yeeladaa xuub bu'eed u gooni ah. Habkaan waxaa loo yaqaanaa isgalayn (encystment). Marka la helo xaalado degan oo aan liddi ku ahayn, ayuu gidaarka adagi dillaacaa oo ay meeshii ka soo baxaan amiibooyin yar yar. Jinsiyo amiibooyinka ka mid ah waxay dhaliyaan xanuunka loo yaqaan xundhurta.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Amiibada&oldid=142230"
Last edited on 28 May 2015, at 12:50
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 12:50.